Sajhasabal.com |मलाई मन्त्री बन्न रोक्न सक्ने कसैको क्षमता छैन, म मन्त्री हुन्छु, हुन्छु – नेत्रनाथ अधिकारी -(भिडियो
पर्वतका स्थानीय तहमा पूर्व एमाले-माओवादीको हैसियत बराबर
देश डुबिहाल्ने अवस्था छैन: सांसद पौडेल
मान्यज्यू! हाँसो हो कि मजाक?!–कछुवा गतिमा हिडेको सरकारको रकेटको गतिमा विकास (भिडियो)
पर्वतमा विकराल बन्दै आत्महत्या, यस्तो छ तथ्यांक
जेष्ठनागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण गरी जेष्ठनागरिक दिवस मनाइयो
सालीमाथि जबरजस्ती गर्ने दुर्गालाई ५ बर्ष जेल सजाय
पर्वतमा १० वर्षीय बालकद्वारा ७ बर्षिया बालिका बलात्कृत
सूचनाकेन्द्रले सार्वजानिक गर्यो आफ्नो आयव्यय(भिडियो)
अर्थाभावले निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र अलपत्र
पर्वतमा पहिलोपटक भित्रियो मकै छर्ने मेसिन
पर्वत । बामगठबन्धनको तर्फदेखि पर्वत क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका नेत्र नाथ अधिकारी (हिमाल)ले आफूलाई मन्त्री बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं पर्वतका इन्चार्ज समेत रहेका अधिकारीले आफूभन्दा माथिल्लो तहको माओवादीमा कुनै पनि नेता नभएका कारण प्रदेश ४ मा आफू मन्त्री बन्ने पक्का नै भएको खुलसा गरेका छन् ।
मन्त्रीमा मेरो दाबी छ र हुन्छु पनि , मभन्दा माथिल्लो तहको नेताहरु प्रदेश ४ मा छैनन त्यसैले मेरो मन्त्री हुने सम्भावना छ । उनले एक टेलिभिजमा दिएको अन्तरबार्तामा भनेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त बामगठबन्धनको तर्फदेखि आफू प्रदेश ४ मा मन्त्री बन्ने उनले बताए पनि कुन मन्त्री भन्ने बारे खुलाएका भने छैनन् ।
उनले माओवादी र एमालेविच ६०÷४० को भागबण्डाको आधार तयार भएका कारण आफू मन्त्री बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
अधिकारीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रविच एकता हुने समेत बताए । उनले माथिल्लो तह देखि तल्लो तहसम्म एकताको लागि समिति समेत गठन गरी सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उनले ढिलो चाँडो एकता हुने बताए । उनले एकता नभए नेपाली जनताले अब नछोड्ने समेत तर्क गरे ।
नेपाली जनताले एमाले र माओवादीलाई एक हुनको लागि पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमत दिएर आफ्नो जनादेश दिएकोले अब एकता भएरै छाड्ने उनले बताए ।